Mahorizera efriji → Chipfeko chechitoro chinotonhora • P & M embroidery yekombuta
Maharaji efiriji emabasa akakosha
Freezer uye inotonhora zvipfeko zvechitoro pm.com.pl yakasarudzika sarudzo yezvokupfeka iyo yakakwana kune yakaoma mamiriro. Iyo yakasimbiswa assortment yakagadzirwa yeakanakisa zvinhu inoita kuti ishande munzvimbo dzakadzika tembiricha yakachengeteka uye yakagadzikana zuva nezuva. Tirauzi furiza ndechimwe chezvinhu zvezvipfeko zvehunyanzvi zvekushanda mune yakaoma mamiriro ekushanda.
Padyo padyo nemajaketi uye chando chitoro bhutsu ndicho chikamu chakakosha kwazvo pamidziyo yemushandi. Pane peji redu rechitoro, zvipfeko zvechitoro chinotonhora zvakanyatsorongedzwa kuti zvive nekukurumidza uye nyore kutsvaga.
Yakavharirwa dungarees yekudzivirira kubva kutonhorera kusvika -45 ° C
Mahara emahara inowanikwa muhukuru kubva kuS kusvika pa3XL, uye avo emhando yepamusoro vanokodzera vese vakadzi nevarume. Dungarees ndiyo nguo yesarudzo yekuchengeta kudziya kwemuviri zvakanyanya uchibvumira rusununguko rwekufamba.
Mugadziri akapa akasiyana mavara mavara (semuenzaniso navy bhuruu, girini, bhuruu) uye mamodheru ane madiki mapatani muchimiro chemavara ane mavara. Mutengo wekukwikwidza ndiyo mhinduro kwayo kune vanhu vari kutsvaga mhinduro dzemari, uye kana uchitenga huwandu hukuru, pane mukana wekupa imwezve mutengo.
Hi-Glo 25 Coldstore bhurugwa, chengetedza pasi kusvika -64 ° C
Cold chitoro bhurugwa - sarudzo yakachengeteka
Bhurugwa remakamuri anotonhora uye mafiriza yakagadzirwa nezvinhu zvakasarudzwa zvakafanira senge donje kana polyester, kudzivirira kubva kuchando kunyangwe kusvika -64 madigiri C. Mhando dzakapihwa dzine mabhatani akasununguka, homwe, uye zvigadziri zvinogadziriswa zvekunyaradza kukuru. Bhurugwa rine zvitupa zvekuenderana zvinosimbisa kwavo kuchinjika kuti vashande mune zvakaderera tembiricha.
Pamusoro pezvo, kana iwe uchida kuverengera mbatya dzako, unogona nyore kuraira yakasanganiswa kubva machira emakomputa kana kudhinda kwescreen nemifananidzo yako pachako, zita rekambani, zita kana chinzvimbo. Iyo mhinduro yakakwana kune avo vanoda kugadzira inoenderana kopi yemufananidzo.
Tine wega muchina pakiiyo inotibvumidza isu kudzora kumaka pamatanho ese eprojekti uye kuita pakarepo kana paine chero shanduko. Chikwata chedu chine ruzivo chinobatsira mukusarudzwa kwezvigadzirwa uye chinopa yemahara yekumaka kuongororwa.